‘संविधानमा ८८ त्रुटि भेट्टाएँ’ (भिडियो) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
‘संविधानमा ८८ त्रुटि भेट्टाएँ’ (भिडियो)
संविधानको चार वर्षः
access_time२०७६ साल आश्विन ३ गते, शुक्रबार ०१:१८ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति भिडियो
संविधान जारी हुने बेलामा चार राजनीतिक दलको नेताबीच १६ बुँदे सहमति भयो । संविधान जारी भएपछि पावर सेयरीङ हुने कुरा भयो । तत्कालीन चार दलको नेता को के बन्ने भन्ने कुराको बढी महत्वपूर्ण रह्यो । उनीहरुलाई संविधान कस्तो बन्ने भन्दा पनि संविधान जारी भएपछि आफु के बन्ने भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण भयो । संविधानको नतिजा अहिले यो हालत भयो ।
नेपालमा जे हुन्छ, त्यो एसिया कै उत्कृष्ट हुन्छ । २०४७ सालको संविधान पनि एसियाको उत्कृष्ट भन्दै थियो तर उकृष्ट संविधान मा¥यो कोही पनि सति गएनन् । अहिलेको संविधानमा एजेण्डा स्थापित भयो । संविधानको प्रस्तावना सबैभन्दा उत्तम छ । यो विषयमा कसैले पनि बिमती राख्दैन । तर संविधानको प्रस्तावना अनुरुप संविधानको केही धाराहरु बन्न सकेन । हतारहतारमा आन्दोलनको बीचमा संविधान आयो । नेपाल पहिलो देश हो, जहाँ राष्ट्रियसभा पहिले र प्रतिनिधिसभा पछि गठन भयो ।
नेपाल यस्तो देश हो । जहाँ हारेका नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइन्छ । संवैधानिक आयोगहरुलाई विभेद गर्छ । आयोग संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उनीहरुको काम। कर्तव्य र अधिकार अनुसार चल्छ । जस्तोः जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग संघीय कानुनले निर्धारण गरेको अनुसार चल्नुपर्छ । उस्तै प्रकृतिको आयोगमा किन यस्तो भिन्नता हुन्छ ? यस कारणले संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ ।
संविधानको कार्यान्वयनको लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । म सामान्य राजनीतिक शास्त्र बढेको बिद्यार्थी हुँ । सामान्य हेर्दा त मैले संविधानमा ८८ वटा त्रुटि भेट्टाएँ । यो संविधानलाई दिवसको रुपमा मनाउने पर्छ, मलाई लाग्दैन । संविधान जारी भएकै पनि देशको ठूलो भागमा आन्दोलन भयो । कति सहिद पनि भए ।
तिनै वटा सरकारको लेखा परीक्षण महालेखा परिक्षणले गर्छ भन्ने लेखियो । आर्थिक बेरुजुको ठूलो रकम आएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले बताउँछ । हामीले आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न सकिएन भने नेपाल बिश्वमा पहिलो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने मुलुक बन्छ ।
एक थरीलाई सबै पाइयो भन्ने छ । एक थरीलाई केही पाइएन भन्ने छ । यही गतिले जाने हो भने यो संविधान अन्तिम नहुन पनि सक्छ । यस्तो दिवस मनाउँदै गर्दा यसको दिर्घायुको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संविधान जारी गरेको चार बर्ष भयो तर नागरिकताको बिषयमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधान दिवस कसरी हर्सोल्लासका साथ मनाउने ? चुनाव भएको कारण हर्सोल्लास भन्ने हो भने यो कसैको प्रयोग पनि हुनसक्छ । यो चुनाव कसैको रणनीतिक प्रयोग पनि हुनसक्छ । यसलाई कसैले प्रगतीको रुपमा लिनु हुँदैन ।